Gịnị na-amasị gị kacha mma n'etiti E-skuuta, smart skuuta na E-skateboard? - Jomo Technology Co., Ltd
Gịnị na-amasị gị kacha mma n'etiti E-skuuta, smart skuuta na E-skateboard?
Ọdịdị , ọdịdị nke ha dị iche iche, ma ihu ọma ịdabere na nke itule nke ndị mmadụ iji nweta, banyere itule ike mkpa a ụfọdụ mmụta usoro, ọ dịghị onye ga-adị mma na-agba ndị a ebe ọ bụ na ha na-amụ.
Electric skuuta tụnyere nke ikpeazụ abụọ, ọ bụ mfe ịmụta na akara dị ka weel dị ka ihe nchebe, n'ihi na ahụ dị larịị nwere ike belata ohere nke jiri, karịsịa novice, mgbe ịdabere na ya ighota na direction.
Breeki , ha niile nwere breeki ọrụ, ma braking usoro bụ dị iche iche, electric skuuta si breeki bụ n'ibu breeki, na n'aka ekpe nke n'aka menjuobi ka a breeki button, ị nwekwara ike ịbanye na wheel n'azụ gị, ọ bụ n'ezinụlọ breeki.
The Smart skuuta na Electric Skateboard's breeki na-adabere na reverse itule, mgbe inertia nke ndị mmadụ na ugbo ala ga-apụ n'anya na breeki, n'agbanyeghị ihe na-agba bụ, na brek nwere ike mfe na-achịkwa, ha na-arụsi ọrụ breeki.
Speed , n'okpuru nkịtị ọnọdụ, ọsọ nke electric skateboard na-ngwa ngwa, na-arịgo ike dị mma karịa ndị ọzọ na abụọ. Nkịtị na-agba bụ 30km / h, top ọsọ bụ 40km / h, na-aga ngwa ngwa
Koowheel Electric skuuta L8, na max ọsọ bụ 25 Km / h mgbe ezumike factory (The max ọsọ ike ka agbazi ka 30KM / H thrugh APP ọnọdụ site ọrụ)
The max ọsọ nke Smart itule skuuta K5 bụ 15KM / H.
Ọ nwere ike na-hụrụ na electric scooters L8 na Electric skateboard bụ ngwa ngwa karịa smart skuuta na-agba. Anyị nwere ike na-ebu ya na-aga ebe ọ bụla. Electric skateboard bụ ihe oru oma, ihe doro anya n'oge ngwa ngwa awa. All n'ime ha bụ ndị ezi ngwá ọrụ maka obere njem.
N'elu fashionable na jụụ mkpụmkpụ-njem ngwaọrụ, nke kasị amasị gị?